ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေသော အကျင့်ဆိုးများ | အိမ့်မှူးသော်
Folder လေးတွေပေါ်မှာ မြန်မာလို ရေးလို့ရအောင်
မတောက်တခေါက် ကွန်ပျူတာအကြောင်းလေးများ (၂)
လျှို့ဝှက်ကုဒ် နဲ့ gmail ပို့မယ်
အပျင်းပြေ သီချင်းနားထောင်ရအောင်( အားလုံးအိုကေ)
သင်္ကြန်အိပ်မက်( လွှမ်းပိုင်၊ Bobby Soxer )
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးနှင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံသား လူဝင်စာ...
စာဖတ်ခြင်း စာမဖတ်ခြင်းနှင့် ယနေ့ခေတ်လူငယ်
ရဟန်းတော်များ ဆွမ်းခံရခြင်း အကြောင်းအရင်း
Facebookက သူငယ်ချင်း(၃၂၅)ယောက်စလုံး ကိုသွားတွေ့ တဲ...
ဘာဘီရုပ်နှင့် တူသော ကောင်မလေး
Myanmar - English Dictionary
haha photo gtalk virus သတ်ရန်
Web page မှာရှိတဲ့ ကြော်ငြာဆိုက်တွေကို ဘလော့မယ်
အိမ် ခြံ မြေ အခမဲ့ ကြော်ငြာလိုသူများအတွက်
Gmail အကောင့်အသစ်ပြုလုပ်သူများ မြန်မာပြည်ဖုံးနံပါတ...
ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေသော အကျင့်ဆိုးများ
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ထူးခြားချက် (၁၈) ချက်
ဖျတ်မိသွားသော Data တွေ ပြန်ယူမယ်
ကျွန်တော်စက်မှာ ဖြစ်သော ကွန်ပျူတာ error လေး နှစ်ခု...
ယောကျာ်းလေးတွေသတိထားမိတတ်တဲ့ ပထမဆုံး အချက် ၁၀ ချက်...
နံနက်စာ စားတာဟာ အလုပ်ခွင်နဲ့စာသင်ကျောင်းမှာ စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုမြင့်မားလာစေပါတယ်။ နံနက်စာမစားရင် သွေးကြောသကြားဓာတ် လျော့နည်းပြီး မောပန်း ခေါင်းကိုက်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
၂။ အစာစားပြီး ရေများများသောက်ခြင်း
အစာစားပြီးခါစမှာ ရေအ၀သောက်ရင် အစာခြေဖျက်မှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွက် အစာစားပြီးစမှာ ရေတနင့်တပိုးသောက်မည့်အစား တစ်နေ့တာကာလအတွင်း သောက်နိုင်သမျှ မျှသောက်ပါ။
အစားကို နင့်နေအောင်စားရင် အစာအိမ်ဒဏ်ဖြစ်ပြီး အစာအိမ်ရှုံ့ပွမှုကို နှေးကွေးစေပါတယ်။ ဒါဟာ အစာခြေလုပ်ငန်းကို အကျိုးယုတ်စေပါတယ်။
အကျရည်ပြင်းတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဟာ အစာခြေဖျက်မှုနဲ့ သံဓာတ်စုပ်ယူမှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့အပြင် ညဘက်အိပ်မပျော်မှုကိုဖြစ်စေပါတယ်။
အရက်ဟာ အသည်းနဲ့အစာအိမ်ကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ အရက်က ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ အစာခြေဖျက်မှုနဲ့ အာဟာရစုပ်ယူမှု စတဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေကို ကမောက်ကမဖြစ်စေပြီး သောက်သုံးသူကို ရှိရင်းစွဲအသက်အရွယ်ထက် ပိုပြီး အိုမင်းရင့်ရော်စေပါတယ်။
အလွန်အကျွံအိပ်ရင်လည်း ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ အစာခြေဖျက်မှုနဲ့ အာဟာရစုပ်ယူမှု စတဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်နှေးကွေးတာ၊ အာရုံခံမှု စွမ်းရည်လျော့ပါးတာနဲ့ခုခံအားကျဆင်းတာတွေ ဖြစ်လာပြီး နှလုံးနဲ့လေဖြတ်ရောဂါတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
၇။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ သွားတိုက်တတ်တဲ့အကျင့်ဆိုး
အစာစားပြီးတိုင်းသွားတိုက်တာဟာ ခံတွင်းနဲ့သွားရောဂါ၊ အဆစ်အမြစ်နဲ့ ကျောက်ကပ်ရောင်ရမ်းတာတွေကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သွားအကြာကြီးတိုက်ရင် သွားဖုံးတွေ ပျက်စီးပြီး သွားဖွံဖြိုးမှုကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
မျက်နှာခဏခဏသစ်ရင် မျက်နှာအရေပြားကို ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး ရုပ်လည်းကျစေပါတယ်။ မျက်နှာကို ဆပ်ပြာနည်းနည်းနဲ့ တစ်နေ့သုံးကြိမ်ပဲသစ်တာ အကောင်းဆုံးပါ။
လမ်းအလွန်လျှောက်တာဟာ ခြေထောက်ရိုးတွေကို ပျက်စီးစေနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
၁၀။ ဒေါက်မြင့်စီးတဲ့ အကျင့်ဆိုး
ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်တွေဟာ အဆစ်တွေကို စောစီးစွာ ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ခြေထောက်၊ ခြေမျက်စိ၊ ဒူး ပေါင်ခြံနဲ့ ကျောရိုးနာကျင်မှုကို မကြာခဏ ခံစားရတတ်ပါတယ်။
ကဲရှောင်ကြ ရှားကြနော်..ကျန်းမရေးလေးကောင်းအောင်...ကျန်းမာရေးကောင်းမှ လုပ်ချင်တာ လုပ်လို့ရမယ်......:)
Posted by အိမ့်မှူးသော်
Snow May 3:09 PM
ဗဟုသုတရတဲ့ ပို့စ်ကောင်းလေးတစ်ခုကို ဖတ်သွားပါတယ်
mstint 3:24 PM
ရင်ဆူး 5:43 PM
မှတ်သားသွားပါတယ် ကိုမှူးသော်ရေ...........ဗဟုသုတလည်းရသလို ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အများကြီးအကျိုးရှိုပါတယ်.......ကျေးဇူး
ချစ်စံအိမ် 9:08 PM
Also visit my blog post; ford ranger
It is triggered by the passion displayed in the article
I looked at. And on this post "ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေသော အကျင့်ဆိုးများ".
I was excited enough to postacomment :-) I actually do haveacouple of questions for you
if it's allright. Is it simply me or does it seem likeafew of the responses look like they are left by brain dead folks? :-P And, if you are writing on additional places, I'd like to follow you.
Would you makealist all of all your communal sites
Also visit my website; ford ranger forum
When someone writes an paragraph he/she retains the idea ofauser in his/her brain that howauser can know it.
My web page :: ford ranger forum
my weblog: http://kidzspaze.com/KendraCau
ဒီအကြောင်းလေးသိတာတော့ ကြာနေပါပြီ ။ အခုမှပဲတင်ဖြစ်တာ။ အခုပြောမယ့်ကောင်မလေးက တရုတ်နိုင်ငံသူဖြစ်ပါတယ်။ ၁၈ ရက် ဇန်န၀ါရီလ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ မွေး...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ နှစ်တစ်ရာပြက္ခဒိန်လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆော့ဝဲလ်ရော၊ အွန်လိုင်းမှာရော သုံးလို့ရအောင် နှစ်မျိုးလုံးတင်ထားပါတယ်။ ဆော့ဝဲလ်ကေ...
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးနှင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံသား လူဝင်စားတစ်ဦး၏ ဘ၀ဖြစ်ရပ်မှန်
သေခါနီးရောက်နေသည့် သတ္တ၀ါသည် မိမိပြုထားသော ကောင်းမှုကံ၊ မကောင်းမှုကံ တစ်ခုခုကို ဖြစ်စေ၊ ထိုကံကိုပြုစဉ်က...
Sky net myanmar online channel
ဒီတခါတော့ ပြည်ပရောက် မြန်မာများအတွက်ပါ။ အတာသင်္ကြန်မှာ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်မဆင်နွှဲနိုင်ပေ့မယ့် သူများတွေ ပျော်နေ၊ ရေပက်နေတာတွေကို အွန်လိုင်...
*အပါယ် လေးပါး* ၁။ ငရဲ .............................ချမ်းသာမှုကင်းခြင်း၊ ၂။ တိရိစ္ဆာန် .....................ကောင်းကင်ကိုကျောပေး သွားလာသောသ...
မနှစ်က တင်ထားတဲ့လင့်မှာ Skynet up to date ကို ကြည့်လို့မရတော့ပါဘူးခင်ဗျာ။ အခုလင့်လေးမှာ သွားကြည့်လို့ရပါတယ်။ http://www.ustream.tv/c...